Monday April 08, 2019 - 11:04:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ayaa lagu sheegay in ciidamada American-ka lagasoo qaaday Liibiya inta ay socdaan dagaallada u dhaxeeya dagaal oogayaasha isku haya xukunka magaalada caasimadda ah.
Muqaal Video ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada Mareykanka oo doomo dheereeya uga baxsanaya magaalada Daraabulis oo dagaalladu ay kusoo dhowaadeen.
Ciidamada Mareykanka ee bilaabay in ay wadankaas isaga baxaan ayaa sanaddii lasoo dhaafay lageeyay Liibiya si ay qeyb uga noqdaan dagaalka lagula jiro jamaacaadka jihaadiga ah, dowladda Mareykanka ayaa dhowr jeer duqeymo dad shacab ah lagu laayay ka fulisay gobollo katirsan wadankaasi.
dhinaca kale dagaalladii u dhaxeeyay maleeshiyaadka dagaal ooge Khalifa Xiftar iyo ciidamada xukuumadda dabadhilifka Alwifaaq ayaa wali kasii socda hareeraha caasimadda.
Wariyaal ayaa soo sheegay in dagaallada ugu culus ay ka socdaan duleedka magaalada Algharyaan oo khamiistii lasoo dhaafay ay cagta mariyeen ciidamada dagaal Ooge Xiftar.
Xukuumadda Alwifaaq ayaa gelinkii dambe ee maalintii Axadda iclaamisay Olole dagaaleed ay ugu magac dartay Burkaanka Carada si ay maleeshiyaadka xiftar uga difaacato magaalooyinka waaweyn ee ay maamusho.
Ciidamada Dowladda oo dagaal looga saaray degmada Qoryooleey.